एमसिसी देशको आवश्यकता हो, छिटो पास गर्नुपर्छः प्रकाशमान सिंह ! - jagritikhabar.com
एमसिसी देशको आवश्यकता हो, छिटो पास गर्नुपर्छः प्रकाशमान सिंह !
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले एमसिसी पास हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा पराजित नेता सिंहले बुधबार एक सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तरवार्तामा यस्तो बताएका हुन् ।
एमसिसी पास गर्ने सहमति कांग्रेसकै सरकार रहेको बेला भएको र नेपालमा विकास गर्ने एमसिसीको लक्ष्य रहेकाले नेपालका लागि एमसिसी आवश्यक रहेको उनको ठोकुवा छ । पछिल्लो समय नागरिकबाट एमसिसी पारित नगर्न आवाज उठिरहेको र आन्दोलन भइरहेका बेला नेता प्रकाशमान एमसिसीको पक्षमा उभिएका छन् ।
शेरबहादुर देउवालाई निःसर्त समर्थन गरेको हुँ
नेता सिंहले सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई निःसर्त समर्थन गरेको बताएका छन्। उनले मंगलबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सभापति पदको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवालाई निःसर्त समर्थन गरेको बताएका हुन् ।
निश्चित कुनै पद लिने भन्ने सम्झौता भएको भन्ने ढंगले समाचारहरू आएको भन्दै सिंहले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । सिंहले भनेका छन्, ‘प्रथम चरणको निर्वाचनमा सबैले भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुभएको तथा आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हुँदा मैले मेरो स्ट्रेट फरवार्ड स्वभावअनुरूप उहाँलाई समर्थन गरेको हुँ । कुनै अन्य खाले अनर्गल भ्रममा नपर्न म सबै आदरणीय पत्रकार मित्रहरू र समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइलाई अपिल गर्दछु।’
सभापतिमा शेरबहादर देउवालाई समर्थन गरेको प्रसंगमा देउवाले आफ्नो कार्यशैली सुधार्ने र पार्टीलाई नियमसंगत बनाउने वाचा गरेकाले आफूले देउवालाई नै परिक्षणसमेत भइसकेको नेताका रुपमा साथ दिएको बताएका छन् ।
देउवाले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने वाचा गरेको हल्ला चलिरहेका बेला यस्तो कुनै सम्झौता नभएको नेता सिंहको दाबी छ ।
नेता सिंहले हालै सम्पन्न चुनावमा सभापतिमा आफूले तेस्रो स्थान पाउदा संस्थापन पक्षलाई साथ दिएका थिए । उनले निर्वाचनको प्रथम चरणमा ३७१ मत पाएका थिए ।